Hoyga | Soo Dejinta Baabuurkeyga | Baabuur kala soo deg Boqortooyada Midowday (UK)
Ku billow qoritaanka raadintaada kore kadibna riix dib ugu noqo raadinta.
Canshuuraha Soo Deji
EU ilaa UK
USA ilaa UK
Dunida inteeda kale ilaa UK
GAADIID KA GADO UK NZ
Gaari u rarida UK
Dunida inteeda kale Uk
Tijaabada Gawaarida UK
Baabuurkaaga ka soo dejiso ama ka diiwaangeli UK
Soo dejinta Gawaaridaydu way rar kartaa, wax ka beddeli kartaa, tijaabin kartaa oo diiwaangelin kartaa gawaarida meel kasta oo adduunka ka mid ah illaa Boqortooyada Ingiriiska.
Shabakad caalami ah oo rar
Shabakad balaaran oo wakiilo ah, oo dabooleysa gaadiidka gudaha, habraacyada dhoofinta iyo rarka konteenarada ee Boqortooyada Midowday.
Kaliya haadka imtixaanka IVA ee gaarka loo leeyahay
Awood gaar ah oo si badbaado leh wax looga beddelo, loo tijaabiyo, loona diiwaangeliyo - kaliya xaruntayada.
Diiwaangelinta DVLA ee degdega ah
ka go'an DVLA xiriirada si loo hubiyo diiwaangelin hufan oo habsami leh.
Baabuurta noocee ah ayaan soo dajineynaa?
Boqolaal macaamiil ah bishii ayaa na doorta inaan wax walba ka soo dejino min supercars ilaa superminis.
U guurista Boqortooyada Ingiriiska
Haddii aad gaariga laheyd 6 bilood oo aad ku nooleyd meel ka baxsan Midowga Yurub muddo 12 bilood ah, waad soo dejin kartaa gaarigaaga canshuur la'aan. Waxaan tan ku sameeynaa annaga oo isticmaaleyna Codsi Beddel degenaansho.
Waxaan ku qabaneynaa howsha nadiifinta kastamka adiga oo matalaya adiga, waxaanna hubineynaa inay sax ku tahay HMRC. Tani waxay hubineysaa xaddiga saxda ah ee VAT iyo waajibaadka in la bixiyo.
EU ilaa UK?
Waxaan kula macaamileynaa HMRC midowga Yurub NOVA soo galida oo hubi in diiwaangelintaada ee Boqortooyada Midowday loo qabtay si qiimo jaban iyo waqti xasaasi ah.
Horeba Boqortooyada Midowday
Waxaan si farxad leh ula wareegi doonnaa soo dejintaada haddii gaarigaaga uu horeyba u joogay Boqortooyada Midowday. Gaadhigaaga wax laga beddelo, la tijaabiyo oo la diiwaangeliyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Marka la raro oo kastamka la nadiifiyo waxaan kuu diyaarinaynaa gaadiid caymis ku taga xaruntayada si aan wax uga beddelo, u tijaabinno, ugana diiwaangelino baabuurkaaga waddooyinka UK.
Adeeg dhammaystiran illaa dhammaad soo dejin baabuur!
Maxay yiraahdaan macaamiisheennu?
Waad ku mahadsantahay daryeelida soo dejinta baabuurkeyga. Waan ogahay inay si gaar ah caqabado u ahayd, laakiin mahadsanid xiriirada aad la sameysay waxay awoodeen inay helaan qeybaha saxda ah oo ay xalliyaan arrimaha oo dhan si dhakhso leh oo qanacsan.
Aad iyo aad ayaan kuugu mahadnaqayaa adiga iyo kooxda inaad tan si dhakhso leh oo hufan iigu dhammaysaan. Haddii aan nasiib u yeesho inaan u baahdo inaan soo dejiyo baabuur kasta oo fiican mustaqbalka waxaan hubaa inaan mar labaad adeegsan doono adeegyadaada.
Waad ku mahadsantahay inaad shaqo fiican ka qabatay keenista gaadhigayaga Boqortooyada Midowday iyo dhammaystirka qabanqaabada lagama maarmaanka ah. Waxaan isku dayi doonaa inaan u dirno macaamiil badan oo Dubai ah sida ugu macquulsan.
Taarikada ayaa timid, waad ku mahadsan tahay dhammaan gargaarkaaga, waxay ahayd wax lagu farxo la macaamilka shirkaddaada dhibna kalama kulmayo faafinta hadalka.
- Trever Hoos (Taxanaha Landrover 1)
La xiriir maanta qiimo dhimis u gaar ah soo dejintaada. Xigashooyinkayaga soo-jeedinta waa la soo koobay oo waxaa ku jira dhammaan kharashyada - joojinta wixii khatar ah ee kharashyada qarsoon!
Baabuurkaaga Soo Deji oo Diiwaangali UK GAADIIDKA AAN KA WADA SHAQAYNO DAL KASTA Laynkeenna baaritaanka IVA JOOGTII UGU DAMBEEYAY EE IMTIXAANKA IYO DIIWAANGELINTA UK Dhammaadka ilaa Adeegga LAGA SOO QAADO DIIWAANGELINTA GUUD EE UK, WAANU QAADANAYNAA NIDAAMKA OO DHAN 30 Sanno Oo Khibrad Leh AQOON YAHAN, XIRFAD LEH IYO KHATAR 6000+ Gawaadhi la soo dejiyey Laga soo bilaabo SUPERCAR ilaa SUPERMINI - WAANU KHABAR KAHAY!
Baabuurta Soo Dejisa Cariga Ingiriiska
SABABAHA LOOGU DOORTO GARGAARKA GAADHIGAYGA:
Khubaro soo dejisa gawaarida EU & non-EU
Iskuxidhka caalamiga ah ee rarida konteenarada
Khadka kaliya ee gaarka loo leeyahay ee lagu baaro gawaarida rakaabka ee UK
Koox khibrad weyn u leh soo dejinta, tijaabinta iyo khubarada diiwaangelinta
Waqtiga ugu dhakhsaha badan ku noqoshada albaab ilaa albaab ee shirkad kasta oo ku taal Boqortooyada Midowday
Diiwaan gelinta DVLA ee orodka ah
Wakiil ballaadhan iyo shabakad wadaag ah adduunka oo dhan
Ku noqoshada iftiinka guriga iyo diyaarinta imtixaanka u hoggaansanaanta
Soo dejinta Gawaaridayda ayaa 25-kii sano ee la soo dhaafay ka soo dajineysay gawaarida UK oo dhan. Waxaan u soo bandhigeynaa macaamiisha doonaya inay baabuur ka soo dejiyaan Boqortooyada Midowday oo ah beddel sahlan oo ah inay iyagu keligood hawsha qaadaan. Waxaan ku dhisnay ganacsigeenna adeeg xirfadeed albaab-ilaa-albaab kaas oo daboolaya qayb kasta oo ka mid ah soo dejinta gaarigaaga oo joojiso dhibaatooyinka iman kara haddii aadan haysan kooxdayada oo ku caawisa. Waxaan haynaa aqoon balaaran oo faahfaahsan oo loo baahan yahay si loo gaaro go'aanka ah in gaari lagu soo dejiyo Boqortooyada Midowday mid sahlan - waxaan halkaan u joognaa inaan soo bandhigno xalka ku saabsan soo dejinta gaarigaaga UK.
Haddii aad u guureysid Boqortooyada Midowday, baabuur da 'kasta oo aad ka soo iibsatay dibedda ama aad baabuurkaaga Yurub soo gelisay waddanka, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno.
U Isticmaal Baabuurteyda soo dejinta gaarigaaga waana laguu xaqiijin doonaa inta aan u adeegsanno ganacsigeenna adduunka oo dhan shabakad ganacsi, aqoon warshadeed iyo mid gaar loo leeyahay oo gaar loo leeyahay Baaritaanka IVA tas-hiilaadka si dhakhso leh oo qiimo leh aad adiga iyo gaarigaaga ugu soo celiso wadada halkan ku taal Boqortooyada Midowday.
Austria, Belgium, France, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Switzerland, Andorra, Portugal, Spain, Russia, Poland, Czech, Slovakia, Hungary, Greece, Cyprus, Denmark, Iswidhan, Norway, Finland, Iceland, Italy, Republic of Ireland
Bahrain, Israa'iil, Urdun, Kuwait, Lubnaan, Liibiya, Morocco, Cumaan, Qadar, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates
WARBIXINTII UGU DANBEYSAY
Eeg qaar ka mid ah gawaaridii ugu dambeysay ee aan keenno
Cilad: Wax qoraal ah lama helin
Hubso in koontadaasi ay kujirto qoraallo laga heli karo instagram.com.
Gaarigaaga waa nala nabad qabaa
Wadamada Laga Keenay
Baabuurta La Keeno
Meelkasta oo gaadhigaagu kaga yaal aduunka, waanu awoodi doonaa inaanu la tacaalno talaabo kasta oo ah soo dejintaada iyo hawsha diiwaangelinta. Waxaan leenahay shabakad caalami ah oo wakiilo ah oo qaarad kasta ah si ay noo siiso aqoonta maxalliga ah iyo kalsoonida meel kasta oo gaarigaagu yaal.
Waxaan nahay kaliya gawaarida soo dejisa UK ee maalgashi aad u badan ku sameysay DVSA oo la ansixiyay Baaritaanka IVA xarunta for our site. Tani waxay ka dhigan tahay kormeerayaasha DVSA inay adeegsadaan haadka imtixaanka ee goobta si ay u soo saaraan noocyada oggolaanshaha nooca shaqsi ee baabuurka macmiilkayaga. Soo Dejinta Gawaarigeygu waxay si guul leh ugu fulisay Ogolaanshaha Gawaarida Gaarka ah (IVA) kumanaan baabuur ah oo laga keenay dalka.
Gaarigaagu wuxuu imaan doonaa dhismaheena wuxuuna si buuxda uga diiwaangashan doonaa iyadoon loo baahnayn in loo kaxeeyo xarunta DVSA. Iyada oo joogitaankeena adduunka oo dhan iyo ballanqaadka joogtada ah ee dhammaan dhinacyada u hoggaansamida Boqortooyada Ingiriiska, waxaan nahay hoggaamiyeyaasha suuqyada berrinkeenna. Haddii aad shakhsi ahaan soo dhoofineyso gaarigaaga, ganacsi ahaan aad u soo dhoofineyso gaadiid fara badan ama aad isku dayeyso inaad ka hesho oggolaansho nooca mugga hooseeya ee baabuurta aad soo saareyso, waxaan leenahay aqoon iyo tas-hiilaad lagu daboolayo dhammaan shuruudahaaga.
Waxaan ku suganahay xafiisyo iyo aqoon isweydaarsiyo ujeeddo ahaan loo dhisay Castle Donington, Derbyshire, oo ku taal Bariga Dhexe ee u dhow Nottingham iyo Derby iyada oo si fudud looga heli karo M1, M42 iyo A50. Macaamiishayada caalamiga ah waxaan 5 daqiiqo kaxeynaa garoonka diyaaradaha ee East Midlands waana ku faraxsanaan doonnaa inaan kugu soo aruurinno markaad timaaddo. Tareenka fadlan isticmaal saldhigga cusub ee East Midlands Parkway.
IN AAN LA SHAQAYNAYO
Tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah
Khabiir ku ah haysashada wax kasta oo ka yimaada supercar ilaa supermini oo laga keeno kana diiwaangashan UK
Ma suuqgeyn doonaa ganacsiga, wuxuu la macaamilayaa weydiimaha, macaamiisha ganacsiga wuxuuna ganacsiga u kaxeynayaa dhul cusub.
Vikki waxay haysaa bakhaarrada u rogaya meheradda waxayna maamushaa dhammaan howlaha maamulka ee ganacsiga ku lug leh.
Conor wuxuu leeyahay sannado ganacsade weyn iyo aqoonta diyaarinta gaariga
Waxa ay macaamiisheenna leeyihiin
Kaliya qoraal deg deg ah oo aad ku dhihi karto mahadsanid weyn iyo dhamaan kooxda inteeda kale. Waan ka walwalayay gaariga, waxaan u maleynayaa inaad taas ogeyd !! In loo sheego maanta inay marayso baaritaanka IVA waxay ahayd kaliya warka ugu fiican. Mar labaad mahadsanid, shaqo fiican ayaad qabatay waxaanan rajaynayaa inaan lahadlo oo aan ku arko kuligood kadib fasaxii ciida. Xmas wanaagsan iyo Sannad Cusub!
Cutubyada 5-9, Willow Industrial Park, Willow Road, Castle Donington, Derbyshire, DE74 2NP.
SI AAD U HESHO QORAAL SI LOOGU SOO SAARO AMA LOO DIRI KARO GAADHKAAGA FADLAN BUUXI Foomka Codsiga Qotodheer
Su'aalaha kale oo dhan fadlan wac +44 (0) 1332 81 0442